यूरोप जान्नको लागि अन्तराल मार्गहरू यात्रा समाचार
यूरोप जान्नको लागि अन्तराल मार्गहरू
मरियम | | Getaways यूरोप, यात्रा
एउटा रमाईलो र सस्तो तरीकाले यात्रा गर्न जुन धेरै युवाहरूले आफ्नो यात्रा पाठ्यक्रम प्रत्येक वर्ष शुरू गर्छन् इन्टर्राइल भनिन्छ। इन्ट्राईलमा यात्रा गर्न, पहिलो कुरा थाहा पाउनु भनेको तपाई कस्तो किसिमको यात्रा लिनु चाहानुहुन्छ, बर्षको सिजन जुन तपाई यात्रा गर्न लाग्नु भएको छ र कति दिन रोमाञ्च हुन्छ। यी परिसरहरूमा निर्भर रहँदा, हामी टिकट छनौट गर्न सजिलो हुनेछ जुन हामी रेलमार्फत धेरै देशहरूमा यात्रा गर्नेछौं।
इन्ट्राईल एक युरोप, सस्तो र फुर्तिलो तरीका हो जुन युरोपको वरिपरि हुँदैछ, साथीहरूसँग जानको लागि वा तिनीहरूलाई सडकमा गर्न उत्तम छ। यदि तपाईं इंटरेल चाँडै नै गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, तल हामी तपाईंलाई युरोपको स्टेसनबाट स्टेशन जानका लागि आवश्यक पर्ने सबै कुरा र केहि सुझाव दिनका लागि सुझाव दिन्छौं।
1 इन्टरल के हो?
2 Interrail को लागी टिकट कक्षा
3 बिलको मूल्य
4 योजना खर्च र मार्गहरू
5 Interrail को साथ यूरोप को माध्यम बाट
6 Interrail का लागि कागजात
इन्टरल के हो?
जोलाई यो थाहा छैन, तिनीहरूको लागि यो टिकट हो जुन तपाईं निश्चित ट्रेनहरूको लागि विभिन्न देशहरू यात्रा गर्न चाहानु भएको सबै रेलहरूमा जान अनुमति दिन्छ। स्पेनमा, इंटरेल टिकट वैधताको पहिलो दिनको मिति भन्दा तीन महिना अघि वर्षको विभिन्न समयमा पदोन्नति प्रस्ताव गर्ने रेन्फे मार्फत किन्न सकिन्छ। एक पटक खरिद गरेपछि, टिकट व्यक्तिगत हो र ट्रान्स्फर योग्य हुँदैन, त्यसैले पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचय कागजात वा निवास प्रमाणपत्र मार्फत पहिचान र जन्म मिति प्रमाणित गर्न आवश्यक छ।
Interrail को लागी टिकट कक्षा
Interrail Pass को दायरा मा Interrail एक कन्ट्री पास र Interrail ग्लोबल पास शामिल छ। इन्टरल ग्लोबल पासको मामलामा, टिकट १० दिनको अवधिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ (लगातार हुनुपर्दैन) वा २२ दिनको अवधिमा १० दिन। वन कन्ट्री पास छनौट गर्ने सन्दर्भमा विकल्पहरू निम्न हुन्: अधिक लचिलो रूपमा यो एक महिना को समयमा 5,,, or वा days दिन प्रयोग गर्न सकिन्छ।
उमेर, छनौट गरिएको क्षेत्र र यात्राका दिनहरूको आधारमा मूल्यहरू भिन्न हुन्छन्। ग्लोबल पासको साथ तपाईं countries० देशहरू यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ जबकि इन्टरल वन कन्ट्री पासले एकल देशका लागि ढोका खोल्छ।
योजना खर्च र मार्गहरू
यात्रा सुरु गर्नु अघि अर्को आधारभूत चरण भनेको खाना, आवास वा स्मृति चिन्हहरूको लागि बजेट सेट गर्नु हो। यद्यपि हामीसँग अप्रत्याशित क्रेडिट कार्ड हुन सक्छ, बजेट भएमा रातो फिर्ता आउँदैन।
न त तपाईं आफ्नो मार्ग योजना पहिले नै इन्टरल्याल सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। टिकटको प्रयोग सीमित समय भएकोले, सबै भन्दा सल्लाहकार कुरा भनेको कुन शहरहरू हरेक दिन भ्रमण गर्ने भन्ने बारे स्पष्ट हुनु पर्छ, इम्प्वाइजेशनलाई बेवास्ता गर्दै र हामी महत्त्वपूर्ण स्मारकहरू हेर्नेछौं भनेर पक्का गर्दै।
एक पटकको यात्रा निर्णय भएपछि आवासको छनौट गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। सामान्यतया, एक InterRail यात्री युवा छात्रावास को लागी अप्ट आउट गर्न को लागी गर्छ, यद्यपि धेरै सस्तो होस्टल को लागी विकल्प पनि। तपाईं रातीको रेलहरूमा पनि सुत्न सक्नुहुन्छ, यस यातायातको अधिकतम बनाउन र एकै समयमा आराम गर्न।
Interrail को साथ यूरोप को माध्यम बाट
स्पेनबाट सुरू गरेर, मार्ग निम्न हुन सक्छ:
पेरिस: इन्टरिलरहरू र एक उत्कृष्ट सुरूवातको लागि मनपर्ने गन्तव्यहरू मध्ये एक यो लगभग कुनै पनि यूरोपीय स्टेशन संग एक सम्बन्ध छ। एफिल टावर, लुभ्रे संग्रहालय, नोट्रे डेम र सीनको साथ फोटोग्राफिक रिपोर्ट लिनको लागि राम्रो अवसर।
ब्रसेल्स: यसका धेरै सums्ग्रहालयहरू, बजारहरू र पौराणिक भव्य ठाउँ शहरको केही उत्कृष्ट आकर्षणहरू हुन्। मन्नेकेन पिस उल्लेख गर्नु हुँदैन।
चुरोचो: धेरै आकर्षणको साथ एक रोमान्टिक शहर। ब्रसेल्सबाट रेलमा केवल एक घण्टाको दूरीमा स्टेसन छोड्नुपर्दछ र कुनै परिकथाबाट सीधा शहरमा ठक्कर खान सक्छ। नहरहरू, सपनाका घरहरू र जताततै चकलेट पसलहरू।
एम्स्टर्डम: हामी युरोपको सबैभन्दा प्रख्यात शहर मध्ये एकमा पुगेका थियौं, भेनिसको उत्तरी भनिन्छ यसको सुन्दर नहरहरूका लागि। यो जान्नको लागि साइकल भन्दा राम्रो केही छैन, नेदरल्याण्ड्सको मनपर्ने यातायातको साधन।
बर्लिन: जर्मन राजधानी आधुनिक, गतिशील छ र महाद्वीपमा केही उत्तम संग्रहालयहरू छन्।
ड्रेस्डेन: जर्मनीको सब भन्दा अज्ञात शहरहरू मध्ये एक। दोस्रो विश्वयुद्धको दौडान बम विष्फोटले शहर ध्वस्त गर्यो तर पछि यसको विरासत पुनर्निर्माण गरियो यो जस्तो थियो र यो सबै यात्रीहरूका लागि रमाइलो आश्चर्य हो।
प्रगा: ड्रेस्डेनबाट केवल hours घण्टा चेक गणतन्त्रको राजधानी हो, यो अनौठो भवनहरू र चार्ल्स ब्रिजजस्ता अविस्मरणीय स्मारकहरूले भरिएको शहर हो।
म्यूनिख: यो जर्मन शहर युरोपका अन्य मनोरन्जनात्मक ठाउँहरू मध्ये एक हो जसको फराकिलो गतिविधिहरूको विस्तृत श्रृंखला उपभोग गर्न सकिन्छ।
Interrail का लागि कागजात
क्रममा प्रासंगिक दस्तावेज हुनु आवश्यक छ। अधिकांश युरोपेली देशहरूको लागि, मान्य आईडी सीमा नियन्त्रणहरू गर्न पर्याप्त छ, यद्यपि यो एक राहदानी र यूरोपियन स्वास्थ्य कार्डको साथ पनि यात्रा गर्न सुझाव दिइन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » यूरोप जान्नको लागि अन्तराल मार्गहरू